Burma Partnership » Media Advisory: Press Conference on the Performance of the Myanmar National Human Rights Commission
By Burma Partnership, Equality Myanmar, Forum Asia and Smile Education & Development Foundation • November 14, 2015
FORUM-ASIA, as secretariat of the Asian NGO Network on NHRIs (ANNI), together with Burma Partnership, will undertakeafact-finding mission from 16-18 November 2015 to inquire into the impact and effectiveness of the Myanmar National Human Rights Commission (MNHRC).
Amid the optimism surrounding the elections, pervasive human rights abuses continue throughout the country, such as: land confiscation; arbitrary detention, arrest and imprisonment of peaceful protesters; abuse of repressive legislation to restrict legitimate human rights work; sexual violence in conflict zones; and the targeting of civilians in military offensives, among others. Given the longstanding human rights abuses in the country, it is critical that the MNHRC isaviable and effective accountability mechanism to address these issues. As such, this upcoming fact finding mission is essential in assessing the impact of the MNHRC’s role for human rights protection and governance in the country.
This is also timely and significant as the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) will assess the MNHRC for its institutional compliance with the Paris Principles (16 – 20 November 2015), which are the minimum standards for National Human Rights Institutions (NHRIs) to be considered credible and operate effectively. An “A” status institution denotes an independent, effective and accountable NHRI that is fully compliant with the Paris Principles.
The delegation will holdapress conference to giveadebriefing and present key observations/findings from the mission. Smile Education and Development Foundation and Equality Myanmar will join the mission team. We will also share the main highlights of the 2015 ANNI Report on the Performance and Establishment of National Human Rights Institutions in Asia “Burma: All Shook Up”.
Date: Wednesday,18 November 2015
Venue: Best Western Green Hill Hotel, No. 12, Po Sein Road, Tamwe Township, Rangoon, Burma
Betty Yolanda (Head of Mission, Forum-Asia Country Programme Manager)
Prof. Kwong-Whan Ahn (former Chairperson of the National Human Rights Commission of Korea and Professor of Law, Emeritus, Seoul National University)
Nur Kholis (Chairperson, National Human Rights Commission of Indonesia, Komnas HAM)
Myo Win (Director, Smile Education and Development Foundation)
Aung Myo Min (Director, Equality Myanmar)
Aung Myo Min, Equality Myanmar, +95 (0)9448015306 (Burmese/English)
Khin Ohmar, Burma Partnership, +66 (0)818840772 (Burmese/English)
Joses Kuan, Burma Partnership, +95 (0)9793112839 (English)
၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက်နေ့
အကြောင်းအရာ။ ။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည့် မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်၏ဆောင်ရွက်ချက်
နှင့်ပတ်သက်သည့်အပေါ်သတင်း စာရှင်းလင်းပွဲ ဖိတ်ကြားလွှာ။
နိုင်ငံတော်အဆင့် လူ့အခွင့်အရေးအဆောက်အအုံများဆိုင်ရာ အာရှ NGO ကွန်ယက် (Asian NGOs Network On National Human Rights Institutions) ၏ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် ဖေါ်ရမ်-အေးရှား (Forum Asia) အဖွဲ့သည် မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ (Burma Partnership) နှင့်အတူ ၂၀၁၅ ခုနှစ် နိုင်ဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်မှ ၁၈ ရက်အထိ မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် MNHRC ၏ သြဇာသက်ရောက်မှုနှင့်ထိရောက်မှုတို့ကို စုံစမ်းလေ့လာရန် အချက်အလက်ရှာဖွေရေးခရီးစဉ်တခု ပြုလုပ်သွားရန်ရှိပါသည်။
ရွေးကောက်ပွဲအောင်မြင်မှုကြောင့် မျှော်လင့်ချက်များ မြင့်မားနေသည့်အချိန်တွင် မြေယာသိမ်းဆည်းမှု၊ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒဖေါ်ထုတ်သူများကို တရားလက်လွတ်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထောင်ချခြင်း၊ လူ့အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားမှုများအပေါ်ဖိနှိပ်သော ဥပဒေများသုံး၍ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ပဋိပက္ခဒေသများတွင် အမျိုးသမီးများအပေါ် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု၊ စစ်ပွဲများတွင် အရပ်သားများကိုပစ်မှတ်ထားခြင်း စသောလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ နိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပွားနေလျှက်ရှိသည်။ ကာလကြာရှည်စွာ ဤသို့ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသောကြောင့် ဤ ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းရန် MNHRC သည် ထိရောက်ပြီး အသုံးဝင်သည့် တာဝန်ခံမှုယန္တရားဖြစ်ရန် အလွန်အရေးကြီးပေသည်။ ထို့ကြောင့် ယခုလာရောက်မည့် အချက်အလက်ရှာဖွေရေးခရီးစဉ်သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူ့အခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် MNHRC ၏ သြဇာသက်ရောက်မှုနှင့်ထိရောက်မှု အခြေအနေအပေါ် လေ့လာဆန်းစစ်ရာတွင် အထူးအရေးကြီးပါသည်။
တချိန်တည်းမှာပင် ဤခရီးစဉ်မှာ International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) ခေါ်လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မြှင့်တင်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အဆင့် လူ့အခွင့်အရေးအဆောက်အအုံများ၏ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောက်ရွက်ရေးကော်မတီ မှ MNHRC ကို သိက္ခာရှိပြီး ထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်တစ်ရပ်တွင် အနိမ့်ဆုံးရှိသင့်ရှိထိုက်သည့် နိုင်ငံတကာစံချိန်စံညွှန်းများဖြစ်သော ပါရီအခြေခံမှုများနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ ဆန်းစစ်ဆုံးဖြတ်ပေးမည့် အချိန်ကာလ (နိုဝင်ဘာ ၁၆ မှ ၂၀ ရက်ကြား) နှင့်လည်း တိုက်နေသောကြောင့် ဤခရီးစဉ်မှာ အချိန်ကာလအားဖြင့် သင့်လျော်လှပေသည်။ အကယ်၍ ICC မှ MNHRC သည် ပါရီအခြေခံမူများနှင့် အပြည့်အ၀ကိုက်ညီကာ လွတ်လပ်၍ ထိရောက်မှုရှိပြီး တာဝန်ခံမှုရှိသော ကော်မရှင်ဖြစ်ဟု လက်ခံလျှင် “A” အဆင့် သတ်မှတ်ပေးမည်ဖြစ်သည်။
ဤအချက်အလက်ရှာဖွေရေးခရီးစဉ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ၎င်းတို့၏ ပဏာမတွေ့ရှိချက်များကို သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ အောက်ပါအတိုင်း ပြုလုပ်၍ သတင်းမီဒီယာနှင့်အရပ်ဖက်လူထုအသိုင်းအ၀ိုင်းသို့ ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမည်ဖြစ်သည်။ စမိုင်းလ်ပညာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း နှင့် ညီမျှခြင်း-မြန်မာအဖွဲ့တို့မှလည်း ဤသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြမည် ဖြစ်ပါသည်။
ANNI မှထုတ်ပြန်သော၂၀၁၅ ခုနှစ် အာရှတိုက်မှ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးအဆောက်အအုံများ၏ စွမ်းဆောင်မှုနှင့် တည်ထောင်မှုဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာဖြစ်သော “Burma: All Shook Up” ကိုလည်း ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
နေ့စွဲ– ၁၈ ရက် နိုင်ဝင်ဘာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ်
နေရာ– Best Western Green Hill Hotel, အမှတ် ၁၂၊ ဖိုးစိန်လမ်း၊ တာမွေမြို့နယ်၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာနိုင်ငံ
အချိန်- ၁၄း၀၀- ၁၆း၀၀
ဘက်တီ ယိုလန်ဒါ (အထူးတာ ၀န်ခရီးစဉ်ခေါင်းဆောင်၊ ဖော်ရမ်-အေးရှား နိုင်ငံဆိုင်ရာလုပ်ငန်းမန်နေဂျာ)
ပါမောက္ခ ခ၀န်း ၀ှန်အန် (ကိုးရီးယားနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင့် ဥက္ကဌဟောင်းနှင့် ဆိုးလ်အမျိုးသားတက္ကသိုလ် အငြိမ်းစား ဥပဒေပါမောက္ခ)
နူးရ်ခိုးလစ္စ (အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် ဥက္ကဌ)
ဦးမျိုးဝင်း (စမိုင်းလ်ပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးဖောင်ဒေးရှင်း ဒါရိုက်တာ)
ဒေါ်ခင်ဥမ္မာ (တာဝန်ခံ၊ မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ), +66 (0)818840772
ဦးအောင်မျိုးမင်း (ဒါရိုက်တာ၊ ညီမျှခြင်း-မြန်မာ), +95 (0)9448015306
ဂျိုးဇက်စ်ကွန့် (စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးနှင့်သုတေသနရေးအရာရှိ၊ မြန်မာ့အရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူများ), +95 (0)09793112839
Tags: Burma Partnership, Equality Myanmar, Forum-Asia, Smile Education & Development Foundation